Tsvaga China nemakona ayo ausingakwanise kupotsa | Kufamba Nhau
Zvimwe zvinonakidza chokwadi nezve China: nhoroondo, tsika, geography uye zvinokwezva
Mariela Carril | | China, tsika nemagariro, General, Inotungamirira, Kufarira, Asia kufamba
Pamwe vazhinji vava ikozvino kuziva ChinaAsi ndiyo imwe yenyika dzekare pasi rese uye ine imwe yetsika dzinonakidza kwazvo. Zvakakosha kufamba uye kusvika pakuzviziva, asi kwete murwendo rwakareruka uye nekukurumidza asi kutora zvinhu zvishoma zvakanyanyisa uye kuenda kunyatsogadzirira sezvinobvira.
Imwe nyika, China kana imwe, inonyanya kunakidza kana iwe uchiziva chimwe chinhu nezve nhoroondo yayo, tsika nemagariro. Kana iwe uchiziva kwauri, nei ichi chinhu chakavakwa, nei chakadai chakaitika. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuswedera padyo uye rwendo irworwo rwatinofunga nhasi muActualidad Viajes: zvese zvaunoda kuti uzive nezve China usati wafamba.
1 Nhoroondo pfupfupi yeChina
2 Chinese tsika
3 China geography
4 Zvinonakidza muChina
Nhoroondo pfupfupi yeChina
Nhoroondo yenyika ipi neipi yakavanzwa mumhute yenguva, mu marudzi akasiyana achiwedzera kusvikira, nekufamba kwenguva kwenguva refu, kuchipa umambo hwemazuva ano, humambo kana nyika.
China ine zviuru zvishanu zvemakore enhoroondo uye izvi zvakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: Primitive Society, Slave Society, Feudal Society, Semi-feudal uye Semi-colonial neSocialist Society. Kubudikidza nenguva idzi shanu madzishe ane simba anoonekwa, kune hondo dzevagari vemo uye madzimambo mazhinji anotonga anomuka nekudonha kwemazana emakore kusvika kuumbwa kwePeople's Republic of China muna 1949 uye kubviswa kusingaperi kwehumambo.
Pakati pe dzinonyanya kuzivikanwa uye dzakakosha dynastiess, iyo yakaratidza kukura kweChina budiriro, tinogona kutumidza zita rekuti Yuan, Ming, Qing, Rwiyo uye Tang Dynasties. Iyo yekupedzisira yave imwe yeakajeka kwazvo sezvo zvakatungamira China kuva nyika ine simba uye yakapfuma, uye zvakafanana zvakaitika kuMing Dynasty, nguva iyo capitalism yakatanga kukura muChina neindasitiri yevhu rakaguma anofarirwa nemaguta uye misika, nhanho munzira inoenda kunzanga yazvino.
Emperor yekupedzisira weChina
Yekupedzisira imba yeChina yaive Qing, mambo wayo, Pu Yi, akapinda munhoroondo nekuve iye wekupedzisira Emperor weChina mukutanga kwezana ramakore rechiXNUMX.
Isu tese tinoziva kuti chiChinese tsika inoshamisa. Chinese hunyanzvi uye hunyanzvi huviri hwayo hwakakosha pfuma. Mune aya zviuru zvishanu zvemakore enhoroondo, maChinese mahunyanzvi hapana kana chavakaita kunze kwekugadzira zvishamiso nezvimwe zvinhu zvavaive nazvo. Vakapawo hupenyu kumatambo akanaka, akasiyana uye asingafi mimhanzi, vakafungisisa pamunhu, pachinamato uyezve vakacherekedza nyeredzi nekufamba kwavo.
El chinese jade, iyo simbi art inozivikanwa se kukamuramidziyo yendarira, iyo chinese calligraphy, the nezvakarukwa, matoyi evanhu, kites yakagadzirwa nemapepa uye yemishenjere, lacquered midziyo mumarudzi akasiyana-siyana.
Zvakare iyo Chinese stamp Yakagadzirwa nesimbi, jade, mazino emhuka kana nyanga, iyo chidzoyi Theater uyezve, sirika uye zvese zvigadzirwa zvinotorwa kubva pasiri tambo iyo iyo yakapfava honye inogona kuruka mumazuva ayo mapfupi makumi maviri nemasere ehupenyu. Zvese izvi chikamu chenhaka yetsika dzechiChinese.
Nhasi, sainzi nemabhuku ekurapa akafumiswa neiyi tsika uye vamwe vevabudisi vayo vakave zvipo zvakanaka zvekuunza kumhuri yedu neshamwari.
Tiine mepu yeAsia muruoko tinozviona izvozvo China inyika enorme iyo inofamba anenge makiromita zviuru zvishanu. Yakave yakakamurwa kuita matunhu mashanu: East China, yakakamurwa kuita mamwe matunhu matatu, Tibet neXinjiang - Mongolia.
Iyo geography yeChina yakasiyana kwazvo uye ine makomo, nzvimbo dzine huswa, makomo echando, zvikomo, mirwi, karst terrain, volcanic calderas, mahombekombe nemasango. Uye zvakare, munyika dzeTibetan ndizvo gomo refu-soro pasi rose, iyo Gomo Everest (anenge 9 zviuru zvemamita kukwirira), yakakomberedzwa nemamwe makomo marefu, ndosaka nzvimbo ino ichizivikanwa se "denga repasi."
China ine 50 zviuru nzizi uye mazhinji anoyerera achipinda muPacific. Iyo Rwizi rweYangtze Ndirwo rwizi rwakakosha, rwune makiromita mazana matanhatu nemazana matanhatu kuseri kweAmazon neNile.Dziva rine mbiri reGorges Dam, chinoshamisa cheinjiniya yemazuva ano, rakavakwa pariri. Kune zvakare iyo Yero Rwizi ane anopfuura zviuru zvishanu zvemakiromita ekuwedzera. Pamwe uye nekukomberedza nzizi ndeyekuti budiriro yeChinese yanga ichikura.
Zvinofanira kutaurwa kuti sezvo China iri nyika yakakura kudaro kune mamiriro ekunze akasiyana uye izvo zvinobvumidza kuvepo akasiyana maruva nemhuka mune imwe neimwe yenzvimbo idzi. Ndosaka paine ese ngamera nemabhiza akaita sembada, tsoko, mapere, nondo kana mapanda.
Vazhinji vashanyi vakaunganidzwa muchikamu chimwe chete cheChina: Beijing, Xian, Shanghai, Hong Kong. Ndinozvinzwisisa, idzi inzvimbo dziri nyore dzekujoinha uye nezvakawanda zvekushanya. Asi China yakakura, saka kana uine nyota yekunakidzwa, chakanakira kurasikirwa nemwedzi wese uye uve unofarira kufamba wakawanda.
MuBeijing hatigone kupotsa iyo Yakarambidzwa Guta, guta rekare ramambo rine mazana ezvivakwa uye zviuru zvehororo. Ndinokurudzira kuona bhaisikopo kare Emperor yekupedzisira Zvakanaka, yakatorwa ipapo ipapo uye inotipa chidzidzo chakanaka mukuvakwa uye nhoroondo.
Izvo zvakare Tinanamen Square, the Mao maoleoleum, the Nhandare Yenyika, the Denga Tembere, iwo Ming Makuva, the muzhizha Palace, zvikamu zve China wall izvo zviri padyo uye iyo hutongs, echinyakare maChinatown emigwagwa yakatetepa uye dzimba dzekare dzine matare.
En Hong Kong, pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweChina, unofanirwa kushanyira Victoria Bay kufungisisa mamiriro enzvimbo dzakareba, Victoria nhamba, chikomo chinogona kusvikwa netram, iyo Avenue yeNyeredzi, the Wong Tai Chi Tembere, Causeway Bay, Repulse Bay wobva wangofamba famba.
En Shanghai mugwagwa wakanakisa pane zvese ndewe Mugwagwa weNanjing. Kune iyo Shanghai Museum, iyo Kumabvazuva Pearl Tower, the Jade Buddha Tembere, Iyo Bund uye iro rakanaka Yuyuan Bindu. Sekushanya ndinokurudzira kuti usarasikirwe nezana ramakore "mataundi emumvura" e Qibao y Zhujiajiao.
Kune chaiwo maChinese nharaunda zviri Guilin: zvikomo, nyanza, nzizi, masango emushenjere, mapako akaisvonaka. MuGuilin zvinokwezva vashanyi ndizvo Bako reRed Flutela Nzou Hunde Chikomo, iyo Nyeredzi Nomwe Paki, mataundi emupunga uye kufamba pamusoro peRwizi rweLi.
Xian iguta rine makore anopfuura zviuru zvitatu enhoroondo uye zvaro zvinokwezva zvinosanganisira: Terracotta varwi, akachengetedzwa akanakisa medieval madziro muChina, iyo Bell Tower, iyo Famen Tembere, Giant Goose Pagoda, Tang Palace uye akati wandei anonakidza dynastic mausoleums.
Tibet Iyo inzvimbo yakazvimiririra uye chaiyo mvumo inofanirwa kupinda. Pane imwe nguva mukati mekushanyirwa kunosungirwa Lhasa, iro guta guru, nemigwagwa yaro netembere dzaro: iyo Sera, iyo Ganden neDeprung, kunyanya. Uye usarega kuenda kwaari Denga rekudenga, dziva rinoyera iro riri pakukwirira kwemamita 4720.
Kune rimwe guta reTibetan rinonzi Shigatse Izvo zvakakodzera kuti uzive uye iyo Tashihunpo Monastery uye iyo Shalu pakutanga. Kune zvakare iyo Imba yePanchen Lama.
Kana iri yemakungwa akanaka iwe unofanirwa kuziva Sanya tsime rezita rokutanga kubva kudunhu reHainan iro rinoziva kusanganisa makomo, gungwa, nzizi, guta nemabhichi zvakanaka kwazvo. Kutevera pamhenderekedzo ndeye Xiamen, asi mudunhu reFujian, rimwe remaguta echiteshi anokosha kwazvo kuChina kwemazana emakore.
Uye kuti urasike muChina hapana chakafanana Yemukati yeMongolia. Iyo inzvimbo yakazvimiririra iri pakati peRepublic yeMongolia neRussia. Ndiro dunhu rakakura kwazvo reChinese pazvose uye chechitatu pakukura. Ine vagari vane mamirioni makumi maviri nemana uye madzinza akati wandei
Sezvo mamiriro ekunze achinyatso shanduka mukati megore, zvinokurudzirwa kudzivirira iyo inotonhora uye yakareba yechando uye kutora mukana wezhizha, uyo, kunyangwe uri mupfupi, unodziya. Ndiyo nyika ye Genghis Khan saka pane iyo Genghis Khan Museum, asi kune zvakare tembere, pagodas uye girini uye yakafara masango uko vashanyi vanogona ruzivo rwehupenyu hweMongolia hwehupenyu. Mufaro.
Ichokwadi ndechekuti China inyika inonakidza uye ndakakundikana pane zvese zvandataura, asi ndizvo chaizvo zvinoita kuti zvive zvakakosha: kunyangwe vakuudze zvakadii, iwe wakaverenga zvakadii, mangani mafoto aunotarisa. China ichagara ichiwedzera kana iwe ukazoishanyira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Zvimwe zvinonakidza chokwadi nezve China: nhoroondo, tsika, geography uye zvinokwezva
ana azzano akadaro
Makomendi enyu anobatsira, ndave kuda kuenda kuChina munaKubvumbi, ndichavafungira
Pindura kuna ana azzano
Iyo inoshamisa Perito Moreno Glacier, muArgentina